Dad 200 gaaraya oo loo xiray rabshado ka dhacay dalka Itoobiya - Halbeeg News
ADDIS ABABA (HALBEEG) – Booliska Gobolka Oromada ee dalka Itoobiya ayaa xabsiga u taxaabay ku dhowaad 200 oo qof oo loo haysto ku lug lahaanshaha rabshado dhiig ku daatay oo Sabtidii lasoo dhaafay ka dhacay xuduudka magaalo madaxda Addis Ababa la wadaagto gobolka Oromada.
Taliyaha Booliska Gobolka Oromada Alemayehu Ejigu, ayaa Wakaaladda Wararka Itoobiya ee FANA u sheegay in 23 qof lagu dilay rabshadihii dhacay Sabtidii, dadkaasoo badankoodu ahaa kuwo kasoo jeeda qowmiyadaha laga tirada badan badan yahay ee Itoobiya.
Taliyaha ayaa sidoo kale sheegay in boolisku ku raad joogaan dad dhac u gaystay goobo ganacsi iyo meherado badan oo la boobay intii ay rabshaduhu socdeen.
Guddiga Xuquuqul Insaanka ee Itoobiya ee magaciisa loo soo gaabiyo EHRC, ayaa iyaguna koox baareyaal ah u diray deegaannada ay rabshaduhu saameeyeen, si loo soo baaro tacaddiyada ka dhanka ah xuquuqda aadanaha ee halkaas laga gaystey.
Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Axmad ayaa cambaareeyey falalkii ka dhacay duleedka Addis Ababa, isagoo ballan qaaday in sharciga la horkeeni doono cid kasta oo arrintaas ku lug yeelata.
Toddobaadkan horraantiisii, waxaa magaalo madaxda dalka Itoobiya ee Addis Ababa gaaray hoggaamiyaha Jamhadda OLF, iyadoo ay sidoo kale dalka Itoobiya dib ugu soo laabteen ku dhowaad 1500 oo askari oo ka tirsanaa dagaalyahannada Jamhadda OLF.
Amiirka Qadar oo waraaqaha aqoonsiga ka guddoomay safiirka cusub ee Soomaaliya
Save the Children oo madaxda Soomaaliya ugu baaqday baabi'inta gudniinka fircooniga